दाउन्नेमा बस प’ल्टिदा १० जना यात्रु घाइ ते,२ को अवस्था ग म्भीर । - समृद्ध नेपाल
अन्तिम पटक फोटो छोई रिप लेख्नुहोस उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् !
कुलमान घिसिङको श्रीमती राप्रपा धादिङको उपाध्यक्षमा चयन’ !
सुताइबाटै थाहा हुन्छ महिला कस्ता पुरुष चाहन्छन् भनेर ! एक चोटी यो पढ्नुहोस र जान्नुहोस !
हरेक रात गर्न मन लाग्छ ? यो कस्तो रोग लाग्यो ?”प्यास कसरि बुझाउनेहोला?
विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ३८ जना ठग्ने महिला पक्राउ
क्याप्टेन विजय लामाले उडान गर्न तयारी गर्दै गरेको बिमानमा कसरि भयो यति ठुलो घटना ?
१२ वर्षसम्म जे’ल जान सक्छन पल शाह ,पर्यो उजु’री
मेयर चौधरीको छोराको निधनमा पूर्वप्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीसम्म मलामी, हजुरबुबाले दिए दागवत्ति
फेसबुकबाट भयो मित्रता, त्यसपछि बढ्यो प्रेम, नालीमा भेटियो यी महिला प्रहरी जवानको शव
यीनै हुन् कान्छी श्रीमती’ले टु” क्रा’टुक्रा पारी जेब्रा झोलामा हालेर धरानको जंगलमा फालिएका मृ’तक दिनेश सिग्देल
दाउन्नेमा बस प’ल्टिदा १० जना यात्रु घाइ ते,२ को अवस्था ग म्भीर ।
नवलपरासी – पूर्वी नवलपरासीको वर्दघाट नगरपालिका ४ दाउने एसमोडमा आज विहान करिब साढे पाँच वजे यात्रु बाहक बस पल्टिएको छ ।
बस पलटिदाँ १० जना यात्रु घाइते भएको र घाइते मध्धे २ जना गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका प्रहरी निरीक्षक एंवम सूचना अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले दिएको जानकारी अनुसार काठमान्डौंबाट महेषपुर आउँदै गरेको लु १ ख ८१३८ नम्बरको बस दाउन्नेको एसमोडमा पल्टिएको हो ।
यो पनि पढ्नु होस् -केही समय अघि आफ्नी श्रीमती दुई छोराला कोठामै छोडेर बेपत्ता भएको भन्दै अभिषेक घतानी मिडियामा आएका थिए । आफ्ना स-साना छोराहरुको बिचल्ली भएको भन्दै उनले श्रीमतिको खोजी गरिदिन आग्रह गरेका थिए । सधै फोन तथा फेसबुक म्यासेजमा थुप्रै ब्याक्तिहरुसगँ श्रीमती बोल्ने गरेकोले अन्तै बिबाह गरेर गएको हो कि भन्ने आफुलाई शंका भएको अभिषेकले बताएका थिए ।
साथै आफू अब साथ दिन नसक्ने भएकोले आब देखि आफुलाई नखोज्नु भनी नोट लेखेर श्रीमती हिडेको उनले बताएका थिए । उनी मिडिया आएको केही समय पछि भने उनकी श्रीमती अहिले फर्केर आएकी छिन । कैलालीबाट श्रीमतिलाई लिएर आएको अभिषेकले बताए । अहिले उनिहरु काठमाडौमा बस्दै आएका छन । उनकी श्रीमतिले भने आफू बिबाह गरेर नगएको बताएकी छिन ।
श्रीमानसगँ झगडा भएको कारणले आफुले घर छोडेर हिडेको उनले बताईन । झगडा गर्ने कहिलेकाहीँ कुटपिट पनि गर्ने भएकोले आफू हिडेको उनले बताईन । तर छोडेर हिडे पनि छोराछोरीको माया भने भै रहेकोले नै अहिले आएको बताईन ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल👇👇👇 क्लिक गर्नुहोला *****
अब लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेको पालो असारपछि मात्रै
के हो बंगालमा विकसित भएको चक्रवात ‘फानी’ नेपालमा पनि असर !
अब विद्यालयको नाम र विद्यार्थीकाे परिचयपत्र नेपाली भाषामा !
निरुता सिंहले आफ्नो ‘जात’ किन ढाँटेको ? कारण यस्तो रहेछ !
ससुरा र देवर मिलेर मसँग सम्बन्ध राखे देखेर विरोध गर्दा श्रीमानलाई सिध्याए !
सुन र हिरा तस्करी, दुई भारतीय नागरिक पक्राउ !
विबाह गरेको छोटो समयमा नै बाबु बन्दै रमेश प्रसाई !
नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत आठ महिनाकी गर्भवती कृति थापाको मृत्यु !
निर्देशक सुदर्शन थापाले जन्म दिनको अवसर पारेर इन्गेजमेन्ट
भारतबाट घर फर्कनेको लर्को,बढ्यो जोखिम
फेसबुकले जुरायको जोडी,माया होस त यस्तो !
थपियो बज्रपात: विमान दुर्घ टना हुँदा १४ जनाको मृ’त्यु, मनमा दया भए फोटो छोएर RIP😭 लेख्नुहोस ।
जतिसुकै बिजी भए पनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला, नपढे तपाईँ लाई पछुतो हुनेछ।